I-300W ibeka i-Solar Generator System Integrated System China Manufacturer
Inkcazo:Umbane odibeneyo woMbane,I-Power Generator Generator,Inkqubo yeHlabathi yokuKhanya kweeNamandla
Umbane odibeneyo woMbane,I-Power Generator Generator,Inkqubo yeHlabathi yokuKhanya kweeNamandla
Home > Imveliso > Inkqubo yasekhaya ye-solar / DC > Inkqubo yeGrid Mini > I-300W ibeka i-Solar Generator System Integrated System
I-300W ibeka i-Solar Generator System Integrated System
Impawu yombane odibeneyo wombane :
1. Iimbanezeli zombane zelanga, ngaphandle kweoli, i-steam, amalahle kunye nezinye iibisi, ngokuchanekileyo ukufumana amandla okukhanya kwelanga, akudingeki ukuba uchithe ipenny, ngokucacileyo ukuphucula umgangatho wobomi kwimimandla engenawo amandla.
2. Igobolondo yangaphandle idibene ne-1.0MM ipulati ebandayo, efanelekileyo ngokufanelekileyo kwintsimi kwintsimi ngenxa yokubonakala kwayo kunye nokunyanga.
3. Ukusebenzisa i-polycrystalline (i-crystal eyodwa) i-panels, i-aluminum yarnalum engqambileyo, i-friji yeluminiyamu eneqabileyo, imfashini kwaye imnandi, iyomelele kwaye iyasebenza, kulula ukuyithwala kunye nokuthutha.
4. Umsebenzi wokulinganisa ubuninzi be-generator yenza ukuba ukwazi ukusetyenziswa kwamandla naliphi ixesha kwaye uqinisekise ukusetyenziswa kwamandla.
5. Ixhotywe ngesibane se-LED esingu-12V5W (isibonakaliso se-5W somoya isibane = 55W isibane esiqhelekileyo ukukhanya, enye inokusetyenziswa rhoqo ngamahora angama-40, ifanele ukufakwa kuyo nayiphi na indawo yokukhanyisa) kwaye ingatshintsha i-bulb ye LED ngokufuna iimfuno zabathengi.
6, isixhobo sobuqili nesipropati, akukho mfuneko yokufakela nokukhuphaza, ukusebenza okulula, okulula kunye nokukhawuleza.
7. Ibhetri engenakulondolozwa yongondlo, ukuphuma kwe-12V / 3, ukuveliswa kwe-2 220V / (110V), ingasetyenziselwa ukusetyenziswa kwezixhobo zombane, ukukhutshwa ngokugqithiseleyo nokukhusela ukukhuselwa komthwalo kunye nokukhutshelwa ngokukhululeka, ukhuseleko oluphezulu lokukhusela, ukukhuselwa kwesekethe kunye neminye imisebenzi.
I-8, i-USB ibhanke ye-buck circuit, ehambelana ngokupheleleyo nokusetyenziswa kwamatribhethi e-lithium, ii-fowuni kunye nezinye iimveliso zedijithali.
9. Izivelisi eziphathekayo zezindlu zelanga, zithe cwaka, zikhanya kwaye ziqhenqele, ubungqina bokutshatyalaliswa kunye nobuthuli, amandla okuluhlaza, ukhuseleko lokusingqongileyo nempilo, yinto yemfuneko kwimimandla engenawo amandla.
Usayizi wepaneli yelanga:
Ubukhulu beepaneli zelanga: 5W (17.5CM * 27CM), 10W (26.5CM * 35.5CM), 20W (35CM * 50CM)
Ubungakanani bebhetri: Eli tyala linokufakwa kwi-24AH (19.5CM * 13CM * 15.5CM), 35AH (16.5CM * 12.5CM * 17.5CM) ibhetri.
20000mAh Ibhanki yamandla eBhanya yeeFowuni
I-Solar Music Camping Lamp Bluetooth